Credit to Rakha Nwe , Myanmar mobile helper group
SCRIPT ရဲ့ SOURCE CODE တွေကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
အသုံးပြုနည်းကတော့ BAT FILE ကို ဒီအတိုင်းအသုံးပြုလို့မရပါဘူး….
(ဒါဆို ကပြီးတော့ သုံးရမှာလား ) ဟုတ်ကဲ့ SCRIPT ကို R-CLICK နှိပ် RUN AS ADMINISTRATOR နဲ့ RUN ပေးမှအလုပ်လုပ်မှာပါ…
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါက ADMINISTRATOR PREVILLAGE ရမှအလုပ်လုပ်လို့ပါပဲ….
Q . အသုံးပြုမယ်ဆို ရင် ဘာတွေရှိထားရမှာလဲ…
A . ဟုတ်ကဲ့ WIFI NETWORK ADAPTER တစ်ခုပဲလိုပါတယ်… LAPTOP မှာဆို WIFI ပါတဲ့ LAPTOP ပါရင်ကိုရပါတယ် ဘာမှမလိုပါဘူး…
Q . ဘာတွေမှာအသုံးဝင်လဲ…
A. မိမိကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ FILE တွေ ကို SHARE လုပ်ချင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာက iNTERNET ကို WIFI ပြန်လွင့်ချင်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်… INTERNET SHARE မယ်ဆိုရင် SETTING သွားချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
Q. WIFI ကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့အမည်နဲ့ PASSWORD ပေးထားလို့ရလား...
Q လွင့်တာရောဖမ်းတာရော WIFI တစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရသလား…
A. ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်…
ကဲ အဲတာကိုစမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်… SOFTWARE မလိုတော့ဘူးပေါ့…